လြှပျစဈဓါတျအားပွတျတောကျမှု အမြားပွညျသူသို့ အသိပေးပနျကွားခွငျး – Shwe Naung
Shwe Thuta | December 7, 2020 | Local News | No Comments
၁။ ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး အ တှငျးရှိခရိုငျနှငျ.မွို.နယျ မြားတှငျ 66kV ၊ 33kV ဓါတျအား ခှဲရုံမြား၊ ၊Distribution Transformer မြား ထိနျးသိမျးပွုပွ ငျခွငျးလုပျငနျး မြား၊၏ရရှေညျ ဓါတျအား တညျငွိမျပွညျ.ဝစှာ ပေးနိုငျရေးအတှကျ ဟောငျးနှမျး၍ ဝနျအားမနိုငျသော 11kV ဓါတျအားလိုငျးကွိုးမြားအားလြှပျကာပါသော ဓါတျအားလိုငျးကွိုး အသဈမြား ဖွငျ.လဲလှယျခွငျး လုပျငနျးမြားနှငျ. ဓါတျအားပွတျတောကျမှုလြော.နညျးကဆြငျးစရေေးအတှကျ သဈပငျသဈကို ငျးမြားခုတျထှငျရှငျးလငျးခွငျး လုပျငနျးမြားကို (၈.၁၂.၂၀၂၀)ရကျနေ. အျဂါနေ.တှငျ (၀၉း၀၀ )နာရီ မှ (၁၂း၀၀)နာရီ အခြိနျအထိဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါသညျ။
လုပျငနျးဆောငျရှကျစဉျအခြိနျအတှငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ ဒဂုံမွို.သဈတောငျပိုငျး၊ သဃျနျးကြှနျး၊တောငျဥက်ကလာ၊ သာကတေ၊ဒေါပုံ၊ မွောကျဥက်ကလာ၊ရနျကငျး၊ ဗိုလျတဈထောငျ၊ဒဂုံမွို.သဈအရှေ.ပိုငျး၊မရမျးကုနျး၊ဗဟနျး၊လှိုငျ၊ အငျးစိနျ၊လှိုငျသာယာ၊ရှပွေညျသာ၊ ထနျးတပငျ၊မဂျလာဒုံ၊ထောကျကွနျ.၊မွောငျးတကာမွို.နယျမြားရှိ ရပျကှကျအခြို.တို.တှငျ အဆိုပါရကျမြား၌အခြိနျပိုငျးဓါတျအားပွတျတောကျမှုအနညျးငယျရှိနိုငျပါသညျ။
၂။ ထိုသို.လုပျငနျးဆောငျရှကျရခွငျးသညျ ဓါတျအားပွတျတောကျမှုလြော.နညျးစရေနျ ကွိုတငျပွငျဆငျဆောငျရှကျရခွငျးဖွဈပါသဖွငျ. ယာယီဓါတျအားပွတျတောကျရခွငျး အတှကျလူမှုရေးအခကျအခဲမြား ပျေါပေါကျလာနိုငျမှုမြားအပျေါ နားလညျခှငျ.လှတျပေးပါရနျ ရနျကုနျလြှပျစဈဓါတျအားပေးရေးကျောပိုရေးရှငျးမှ အမြားပွညျသူထံသို.လေးစားစှာအသိပေးပနျကွားအပျပါသညျ။
၁။ ရန်ကုန် တိုင်း​ဒေသကြီး အ တွင်းရှိခရိုင်နှင်.မြို.နယ် များတွင် 66kV ၊ 33kV ဓါတ်အား ခွဲရုံများ၊ ၊Distribution Transformer များ ထိန်းသိမ်းပြုပြ င်ခြင်းလုပ်ငန်း များ၊၏​ရေရှည် ဓါတ်အား တည်ငြိမ်ပြည်.ဝစွာ ​ပေးနိုင်​ရေးအတွက် ​ဟောင်းနွမ်း၍ ဝန်အားမနိုင်သော 11kV ဓါတ်အားလိုင်းကြိုးများအားလျှပ်ကာပါ​သော ဓါတ်အားလိုင်းကြိုး အသစ်များ ဖြင်.လဲလှယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင်. ဓါတ်အားပြတ်​တောက်မှု​လျော.နည်းကျဆင်း​စေ​ရေးအတွက် သစ်ပင်သစ်ကို င်းများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို (၈.၁၂.၂၀၂၀)ရက်​နေ. အ်ဂါ​နေ.တွင် (၀၉း၀၀ )နာရီ မှ (၁၂း၀၀)နာရီ အချိန်အထိ​ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်စဉ်အချိန်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒဂုံမြို.သစ်​​တောင်ပိုင်း၊ သဃ်န်းကျွန်း၊​တောင်ဥက္ကလာ၊ သာ​ကေတ၊​ဒေါပုံ၊ ​မြောက်ဥက္ကလာ၊ရန်ကင်း၊ ဗိုလ်တစ်​ထောင်၊ဒဂုံမြို.သစ်အ​ရှေ.ပိုင်း၊မရမ်းကုန်း၊ဗဟန်း၊လှိုင်၊ အင်းစိန်၊လှိုင်သာယာ၊​ရွှေပြည်သာ၊ ထန်းတပင်၊မဂ်လာဒုံ၊​ထောက်ကြန်.၊​မြောင်းတကာမြို.နယ်များရှိ ရပ်ကွက်အချို.တို.တွင် အဆိုပါရက်များ၌အချိန်ပိုင်းဓါတ်အားပြတ်​တောက်မှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ ထိုသို.လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် ဓါတ်အားပြတ်​တောက်မှု​လျော.နည်း​စေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသဖြင်. ယာယီဓါတ်အားပြတ်​တောက်ရခြင်း အတွက်လူမှု​ရေးအခက်အခဲများ ​ပေါ်​ပေါက်လာနိုင်မှုများအ​ပေါ် နားလည်ခွင်.လွှတ်​ပေးပါရန် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေးရေးကော်ပို​ရေးရှင်းမှ အများပြည်သူထံသို.​လေးစားစွာအသိ​ပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။